Nezvedu | Doc.com
Pinda sa chiremba Bhalisa sechiremba kana chiremba
Maodzanyemba Zvitsuwa Mariyana
Palestinian Territory Akachengetwa
Saint Pierre naMiquelon
Saint-Martin (French chikamu)
Svalbard Uye Jan Mayen Islands
Turks uye Caicos Islands
Yakanzwa uye McDonald Islands
Bhalisa sechiremba kana chiremba
Doc.com yakavambwa pamwe nechinangwa chekupa pasi rose fomu nyowani yemahara yehutano hutano husingaperi uye husingavimbe nemaitiro echinyakare ekuchengetedza hutano aripo munzvimbo dzese dzenyika.
Parizvino Doc.com yakapa mabasa ehutano pasina muripo wemari kuzviuru zvevarwere munyika dzinopfuura makumi maviri vachivandudza hupenyu hwavo. Izvi zvakawanikwa nekugadzira bhizinesi remhando yepamusoro yekuita kuti "Mahara Yehutano Hutano" iwanikwe kune chero munhu anokwanisa kuwana komputa kana smartphone.
Charles Nader akapa bhizimusi idzva modhi kuvadzidzisi vake kuStanford's Blitzscaling chirongwa chaisanganisira Ried Hoffman, muvambi weLinkedin naChris Yeh, munyori ane mukurumbira webhizinesi uye capitalist yekudyidzana. Mushure mekugamuchira mhinduro yakanaka uye Chris Yeh achidana iyo telemedicine modhi yechi10X chigadzirwa, kambani yakaunganidza mari yekuvandudza yayo blockchain data chikamu uye nekuwedzera masevhisi kune dzimwe nyika dziri kunze kweMexico. Izvi zvakapa kambani kugona kuwedzera kune nyika dzinopfuura makumi maviri muLatin America uye kuwedzera kukura kwayo kuti ipe chakasimba chigadzirwa chigadzirwa, vari mubhodhi vatengi vazhinji, pamwe nekukwiridzira nekuvandudza kambani senge kutenga zita reDoc.com uye kuwedzera iro tekinoroji kusimudzira uye bhizinesi mune mamwe matunhu enzvimbo yehutano. Doc.com yakawedzera masevhisi ayo nekuwedzera kumba kuendesa mishonga kuMexico uye kuve muparidzi wemishonga muLatin america. Charles Nader, CEO weDoc.com, akaverengerwa pabutiro reForbes magazini kaviri inomiririra Doc.com. Magazini iyi yakadoma kambani iyi seLatin American unicorn uye yakataurwa mune mamwe akawanda mabhuku nezvinoburitswa nenhau.
Nhasi. uye iyo US nezvirongwa zvekuwedzera kune dzimwe nyika.
Vatengi vanosanganisira makambani eInishuwarenzi, Telecom, nevamwe mumaindasitiri akasiyana siyana. Doc.com yakavewo mushandi wepamutemo nevabatsiri vejekiseni panguva yedenda rekupa mishonga yeCovid pasirese. Kuburikidza nehukama uhwu, nerutsigiro rwehurumende. Doc.com iri kuwedzera kukosha kune kwayo zvigadzirwa zvinopihwa kubatsira vanhu vanoshaya panguva yedenda.
Nokunzwisisa kusvika kwehunyanzvi huri kushandura nyika yatinogara, Doc.com yakabatanidza matekinoroji uye yakagadzira modhi nyowani yebhizinesi inopa chikafu kubva kuepidemiological analytics, blockchain crypto-economy, telemedicine uye mishonga yekutengesa kupa varwere vazhinji mahara. mabasa ehutano. Chaizvoizvo yakagadzira chirongwa chega chega chisingagone kungoshanda sechishandiso chesainzi kubatsira vanhu, asi zvakare inopa zororo rinodiwa kuvanhu vanoshaya pasi rese nezvatinotenda kuti ndizvo zvakakosha muhupenyu… Hutano.
Nekuti pasina hutano, hungave hutano hwepfungwa kana hutano hwepanyama; Hunhu haugone kuzadzikiswa nepose paunogona.
Mahara Basic Healthcare yevose ... Kodzero yeVanhu… Doc inonunura vhezheni yedu iyo inoramba ichivandudza nekukura sezvo nguva inopfuura nenzira inopenya inoenda kumberi uye mhedzisiro inogona kuyerwa. Hupenyu hwakakanganiswa.
Vanachiremba padhuze neni
Webhusaiti yakagadzirwa na Lou.